Ciidamada Ammaanka oo qabtay Sarkaal ka tirsan Maleeshiyaadka Ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Ciidamada Ammaanka oo qabtay Sarkaal ka tirsan Maleeshiyaadka Ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab.
Ciidamada Ammaanka oo qabtay Sarkaal ka tirsan Maleeshiyaadka Ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab.
Muqdisho-Howlgal qorshaysan ayay Ciidamada ammaanka ee Gobolka Banaadir ku soo qabtay xubin ka tirsan amniyaadka kooxda Al-Shabaab, xilli uu ku dhuumaaleysanayay qaybo ka mid ah Degmada Heli-waa.
Taliska Ciidanka nabad sugidda iyo sir doonka Qaranka ee NISA ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in howl-galkan uu dhacay 13-kii Bishan oo Xalay ahayd, kaas oo ahaa mid si gaar ah ayay ugu raad joogeen horjoogahan.
“Ciidamada amniga ayaa xubin amniyaad-ka Al-Shabab ah kusoo qabtay howl-gal qorshaysan oo ay ka fuliyeen Degmada Heliwaa Habeennimadii Jimcaha ee ay Taariikhdu ahayd 13-ka Sabtember, 2018, howl-galka cidi wax kuma noqon.” ayaa lagu yiri warka NISA.
Taliska Ciidanka Nabad Sugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa Shacabka ka codsaday in haddii ay helaan xog ku saabsan Al-Shabaab ay lasoo xiriiraan halka ugu dhow ee ay ku sugan yihiin Ciidamada ammaanka.
Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa wada dedaallo xooggan oo lagu laba jibbaarayo sugidda nabad gelyada Dalka iyo la dagaallanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Wasaaradda Waxbarashada XFS oo sagootisay Arday deeq Waxbarsho ka helay Ethiopia
owladda Soomaaliya oo wadda Baaritaanka Dhacdo dad rayid ah waxyeello kasoo...